Omunye basketball abadlali kulenkhulu isikhathi sethu wazalwa ngo-Philadelphia (Pennsylvania) August 23, 1978. Kobe Bryant, ukukhula zazo kuleliphuzu 198,12 cm nesisindo 100 kg, ngempela omunye wabadlali enkulu. Okuphawulekayo yiqiniso lokuthi uyise, Dzho Brayant, naye ubengomunye wabadlali NBA wafinyelela eziphakeme eside ngalo mdlalo. Ukuze zonke professional basketball umsebenzi wakhe Jelly Bean (njengoba okuthiwa Joe) wachitha 606 imidlalo in the ANCYL we-Association, okuyinto kukora 8.7 amaphuzu emdlalweni ngamunye ngokwesilinganiso.
Isikole samabanga aphansi esizayo NBA inkanyezi aphethwe e-Italy, futhi kwakungekho ukujwayelana kwakhe ne-basketball. Ngemva Kobe ebuyela ekhaya, lo mdlalo baba umsebenzi wakhe oyinhloko. ukuqeqeshwa Daily, kayise iseluleko, ukubuyekeza nokuhlolwa isiqophi imidlalo ... Through kwansuku Kobe Bryant kuqala ukukhula ngokushesha ngempela njengoba umdlali - ngokwenyama hhayi kuphela, kodwa futhi ngokwengqondo. Ngemva Bryant engena ophakeme Lower Merion esikoleni, sibonga umsebenzi wakhe ngokuzikhandla nangokwethembeka ithalente zemvelo, intokazi basketball inkanyezi cishe ngokushesha amehlo okwandile scouts, abafuna abadlali ezinhle. Akubuzwa ukuthi ukuvivinya umzimba njalo kuye kwaholela yokuthi iminyaka 4 nethimba lakhe, okuyinto obala ngokuthi "okubi" iba ubuqhawe isimo. Futhi ngokuyisisekelo kuba sokunconywa Bryant. Ekugcineni, Kobe Bryant waba umdlali ezikhiqiza kakhulu esimweni emlandweni walo. Sekukonke, wakwazi ukuthola amaphuzu 2883 amaphuzu. Ngenxa yalokho, ngo-1996 wathola isihloko umdlali best phakathi zesikole. Ngokwemvelo, ngemva kwalokho umnyango emhlabeni NBA wavulwa kuye.
Ukuqala umculi okhokhelwayo
Ithimba kuqala professional basketball inhlangano, owakhetha kuye, kwaba "Hornets Charlotte" e-NBA Okusalungiswa, wayephenywa inombolo 13. Kodwa ngokushesha adayiswa kuye kuze kube "Lakers-Los Angeles" ku Vlade Divac ukudlala isikhundla ngokugxilisa lapho nje okudingekayo, "le Hornets." Kobe Bryant, ngenhlanhla kwaba unogada ngokudubula. Phakathi naleso sikhathi, "Lakers" inkanyezi abasha isibe show asebenzayo kakhulu futhi bagomela ngokwaso ezingasho. I ngokukhethekile ufuna asho phakathi Zonke-Izinkanyezi ngempelasonto, lapho aba khona umdlali kakhulu ngezikhathi umdlalo uma udlala Cubs.
Ngemva kwalokho, ngisho won mncintiswano Dunk Contest (Ufaka ku iringi kusukela phezulu). Kakade ekupheleni kwesizini lokuqala, Kobe kufakwe ithimba izimfundamakhwela ziyaye we National Basketball Association, lapho umsubathi zakhishwa ngayinye umdlalo isilinganiso 7 amaphuzu wesibili. Futhi engu-19 e Zonke-Star Game umdlalo, eyaqala ngo-1998, eNew York kwakubukiswa ke ukhethwa the starting line-up abantu 5 eMpumalanga All Stars. Ngenxa yalesi inkanyezi abasha sesihlanganisiwe yaqashelwa ngokomthetho njengezwe superstar NBA, ngaleyondlela eba umdlali encane kunawo wonke waba umlando inhlangano. Wasebenzela yimpumelelo engqondweni-ohlabayo. Ukusetshenziswa kwesabelo-inkantolo basketball imizuzu 26 nje, wakwazi ukuphonsa ngokwesilinganiso ngamunye umdlalo ku 15.4 amaphuzu.
Kobe unkosikazi - UVanessa Bryant (umshado nokuboshelwa Lane) - ngahlangana inkanyezi
parquet basketball eneminyaka engu-iminyaka engu-16, ngesikhathi lapho Bryant kwaba kakade 20. Ngaleso sikhathi uVanessa ukuzama ukwenza imali kwi umdansi kumavidiyo ezahlukene umculo. Roman baphotha ngokushesha ngokwanele, futhi njengoba ekuseni njengoba Apreli 18 2001 komkhosi umshado. Kuyaphawuleka ukuthi abazali of Kobe ekuqaleni ngokumelene emshadweni ne uVanessa, wonke ama-agumenti zabo okusekelwe yokuthi umbhangqwana sisebancane kakhulu ukuba leso sinyathelo esibalulekile. Ngenxa yalokho, Kobe Bryant wayeka ngokuphelele ukuxoxa nabazali bazo, futhi lokhu kwaqhubeka iminyaka eminingana.
Ngaphezu kwalokho Kobe ethimbeni 3rd NBA, elibonisa esihle samaqanda Ezenye wakora ngokwesilinganiso umdlalo amaphuzu 20 ngamunye. Futhi naphezu kweqiniso lokuthi wayefanele miss zokuqala 15 imidlalo ngenxa yokulimala okuhlobene ne-ngakwesokunene, Kobe Bryant, uma efika futhi maduze ukubonisa imiphumela lokukwazi. Esikhathini kusuka 1999 kuya ku-2000. ithimba iza umqeqeshi omusha ngegama Fil Dzhekson, nangaphansi umyalo wakhe othi "Lakers" baba NBA Champions. Akubuzwa, ukuthi omunye izinkanyezi eyinhloko iqembu, Yiqiniso, Kobe kanye Shaquille O'Neal. Ngaleyo minyaka, base waqaphela njengoba best udlala ambalwa. Kodwa ngokushesha baqala ezinye ukungavumelani, ukuze Shaq ishiya, futhi ngokushesha bamlandela futhi Umqeqeshi. Kodwa umsebenzi ka-Kobe uyaqhubeka futhi ikhula phezulu kuphela, iqhubeka phambili futhi kwakhiwa yakhe siqu best umdlalo ngokumelene "State Golden" eminyakeni 22 ngesikhathi kuqala - 51 amaphuzu. Plus, ukusebenza yayo manje simi amaphuzu 30 emdlalweni owodwa.
Ngemva cishe iminyaka emibili emva komshado ngesikhathi umndeni Bryant - isenzakalo esibalulekile. Ngo-January 19 ka 2003 ingane yokuqala izalwa. Le ntombazane owayebizwa ngokuthi impela kakhulu - Natalia Diamante (e indlela efingqiwe yokubhala igama - umane Natalia). Ngawo lowo nyaka, kwaqubuka kungamanyala encane. Kobe ngaphansi komthetho wase-US uthweswe ngokudlwengula intombazane encane, owayeneminyaka engu-19 ubudala. Kodwa ngokushesha wonke amacala Ubekwe phansi. Ngesikhathi ababenakho kwengane yabo yokuqala, umdlali we-basketball wakwazi ngixhumane abazali babo. Ngemva kweminyaka engu-3 umndeni livela ingane yesibili, futhi intombazane owayebalwa Gianna Maria-Onore. Wazalelwa-May 1, 2006.
Kobe Bryant, ogama biography langa ngempela, uyaqhubeka ukusetha amarekhodi. I-career ekhazimulayo omkhulu basketball uyaqhubeka, futhi eKobe bakhe inombolo 8 ihembe ku "Lakers-Los Angeles" kuzothatha namanje semali injabulo kubo bonke abalandeli bami futhi abalandeli umdlalo enhle. Abanye bathi ilapho lapho kuye indlalifa yesihlalo sobukhosi sika-basketball ukusebenza uMichael Jordan futhi izikhathi zomphakathi eziningi ziyothi drawl «Wewu!» At drift ngamunye, egcwele ikhadi lakhe lokuthengisa.
Kuleli qophelo kuyafaneleka yokuthi Lebron Dzheyms futhi Kobe Bryant version esemthethweni umagazini "Forbes" kukhona basketball abadlali eliphakeme esikhokhelwayo, simo ku simo se-2 imigqa yokuqala. Basketball njalo usetha amarekhodi entsha bese uhlanganyela cishe yonke imidlalo inkanyezi kuphela kule kokuqala ezinhlanu. Lokhu kuqinisekisa isimo sakhe njengesidalwa basketball inkanyezi sonke isikhathi kweqiniso.
Nate Robinson - esincintisana ezinzima futhi winner
Iphethini elisophahleni amathoyizi. amathoyizi Attica ngezandla zabo
Izidakamizwa "Baklosan": isitatimende
"I okunenzondo eyisishiyagalombili." Abalingisi iphrojekthi Tarantino olandelayo